नोबेल मेडिकल कलेजका आन्दोलनरत विद्यार्थी भन्छन्- उपाय नै नलागेपछि के गर्ने? :: राजु अधिकारी :: Setopati
नोबेल मेडिकल कलेजका आन्दोलनरत विद्यार्थी भन्छन्- उपाय नै नलागेपछि के गर्ने?
आन्दोलनमा नजाऊँ थाम्नै नसक्ने अनावश्यक शुल्कको बोझ, आन्दोलनमा जाऊँ कलेजले 'नोटिस' मा लिएर जुनसुकै बेला बदला लिइदेला भन्ने त्रास।
विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजमा एमबिबिएस पहिलो वर्षमा भर्ना भइसकेका ८० जना हाराहारीका विद्यार्थीले यही दुविधाबीच आन्दोलनको बाटो रोजेका छन्।
'उपाय नै नलागेपछि के गर्ने?,' विराटनगरका एक विद्यार्थीले भने, 'ऐन-कानुनले तोकेको पैसा तिरिसकेका छौं। भर्ना पनि भइसकेका छौं। तर अतिरिक्त शुल्क नबुझाएसम्म पढ्नै नपाउने अवस्था भएपछि आन्दोलनमा जानुको विकल्प भएन।'
'राज्यको नियम नमान्ने, सरकारलाई समेत नटेर्ने कलेजले हामी विद्यार्थीलाई चाहँदा जे पनि गर्न सक्ने रहेछ,' ती विद्यार्थीले साझा पीडा सुनाए, 'त्यसैले परिचय लुकाएर आन्दोलन गर्नुपरेको छ। क्लासमा हुनुपर्ने बेलामा आन्दोलनमा जानुपरेको छ। ज्यादै पीडादायी अवस्था भयो।'
'हामी सबैको पीडा उस्तै छ,' आन्दोलनमै रहेका सुनसरीका अर्का विद्यार्थीले भने, 'हाम्रा आमाबुवा हुनेखाने होइनन्, दुःख गरेर पहिलो वर्षको शुल्क तिरिदिनुभयो। कानुनले लिँदै नलिनू भनेको शुल्क लिन खोजेर कलेजले हामीलाई हैरानी दिइरहेको छ।'
'यो हाम्रो भविष्यको कुरा मात्रै होइन, हाम्रा अभिभावकको ठूलो सपनाको कुरा पनि हो,' सोमबार विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेज परिसरमा प्रदर्शनरत् विद्यार्थीहरू भन्दै थिए, 'अहिले आन्दोलनमा लागेका कारण कलेजले भविष्यमा कुनै न कुनै रूपमा हामीसँग बदला लिन सक्छ। ज्यादै अप्ठ्यारोमा परेका छौं।'
'छोराछोरी कानुनअनुसार पढाउँछौं भन्न पनि नपाइने अवस्थामा पुगियो। परिचय खुलेर छोराछोरीले दुःख पाऊलान् भन्ने डर पनि उत्तिकै भयो,' आफ्ना सन्तानको प्रदर्शन नियालिरहेका एक अभिभावकले भने, 'होइन भने हाम्रा नानीहरूले किन कक्षा लिन पाइरहेका छैनन्? यो देशमा मेडिकल कलेज र त्यसका सञ्चालकका अघि राज्य निरीह भएको हो?'
'सिडिओले प्रमाण लिएर आउनु भन्नुहुन्छ,' उनले भने, 'नोबेल परिसरमा देखिएको यो अवस्थाभन्दा ठूलो प्रमाण के चाहियो?'
विद्यार्थी र अभिभावकको दबाबपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङले नोबेलसँग 'स्पष्टीकरण लिने' औपचारिकता पूरा गरेको छ। नोबेलले प्रशासनलाई दिएको जवाफमा 'कुनै पनि अतिरिक्त शुल्क नलिएको' भनेको छ। प्रशासन त्यही पत्याएर बसेको छ।
'कुन बेला कलेजले हामीलाई नोटिस गर्ला र यतिको लगानी र सपना खेर जाला भन्ने त्रासमा छौं,' विद्यार्थी भन्छन्, 'तर, प्रशासन प्रमाण ल्याउनू भन्छ। राज्य नै नोबेलको संरक्षक रहेछ।'
तर विद्यार्थीहरू एउटै प्रश्न सोधिरहेका छन्, 'यो देशमा कानुन, नियम छैन? कलेज र सञ्चालकले मनपरी गर्न मिल्छ?'
यी विद्यार्थी डराउनुको एउटा मुख्य कारण नोबेल सञ्चालक डा. सुनिल शर्माको पृष्ठभूमि पनि हो। नेपालका गनिएका मेडिकल व्यवसायी शर्मा कांग्रेसका नेतासमेत हुन्।
'यतिञ्जेल कक्षा लिन पाइएको छैन,' अर्का एक विद्यार्थीले भने, 'कोर्स छुट्दा कसरी व्यवस्थापन गर्ने चिन्ता बढेको छ।'
ती विद्यार्थी पनि विराटनगरकै बासिन्दा हुन्। उनी घरबाटै कलेज धाएर पढ्न चाहिरहेका छन्। तर कलेजले होस्टलमा अनिवार्य बस्नु भनिरहेको छ।
'दुइटा खाट मात्रै भएको कोठाको भाडा १२ हजार तोकिएको छ,' उनले सुनाए, 'खानासमेत त्यहीँ खाने र पानी-बत्तीको पैसा सबै जोड्दा मासिक २२ हजार लाग्ने रहेछ। त्यो पैसा मेरो बुबाआमाले कहाँबाट तिर्नुहुन्छ?'
चिकित्सा शिक्षा आयोगले होस्टल अनिवार्य नभनेको तर कलेजले अनिवार्य भनिरहेको उनको भनाइ छ।
नोबेल र केएमसीको भनाइ - बढी शुल्क मागेको छैन
'हामीसँग कुनै राय-परामर्श नगरी राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐनको मर्म, भावना विपरीत आत्मपरक ढंगले अध्ययन शुल्क निर्धारण गरेको छ,' नोबेल र केएमसीले आयोगलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ, 'तर पनि सो निर्णय बमोजिम नै शुल्क लिई अध्ययन अध्यापन गराइँदैछ। आयोगले तोकेको भन्दाबढी कुनै शुल्क लिएको छैन।'
प्रकाशित मिति: सोमबार, पुस १९, २०७८, २३:१८:००